Eastern Cape Department of Health - Abantu baseHamburg bayibiza isibhedlele esincinci ikliniki yabo
Lo kracaza wekliniki unamagumbi amathandathu okuxilongela. Gumbi ngalinye liqulathe ubuxhakaxhaka bobuchwepheshe bale mihla, izihlalo zovavanyo nezixhobo zokusebenza. Igumbi elinye lakhelwe ukujongana neemeko zongxamiseko. Kukho iofisi esebenzayo enekhompyutha ukuncedisa kulondolozo loshicilelo. Iinkcukacha zezigulana ngoku zigcinwa kusetyenziswa ikhompyutha namaphepha. Eli ziko lempilo linegumbi lokulungiselela into esiwa phantsi kwempumlo, igumbi lokugcina amayeza kunye namagumbi angasese wezilugane.
Ukhuseleko lezigulana ngundoqo weSebe lezeMpilo kangangokuba kwakhiwe indlu kanogada esangweni lekliniki yaye izakusebenza iiyure ezingamashumi amabini anesine ngosuku.
Ngomnyhadala wokuvulwa nokunikezwa kwekliniki entsha, Obekekileyo uMphathiswa uSindiswa Gomba uhlangene namalungu oluntu aseHamburg waye wakhuthaza indlela yokuphila esempilweni eluntwini. Uye wabachazela ngezigulo esijongene nazo ezifana nogawuluyo nentsholongwane yakhe, imiba yengqondo noxinzelelo lwegazi.
“Wonke ubani unelungelo lokufikelela kwiinkonzo zezempilo ezizizo yaye njengabazali kufuneka sibafundise abantwana ngezigulo zokwabelana ngesondo”, utshilo Obekekileyo uGomba.
Uye wakwagxininisa ukuba ezempilo zengqondo mazingadelelwa kuba zingumba onobuzaza.
“Abantu abaziqondi izigulo zempilo neempawu zazo. Ezempilo zengqondo zilicandelo elibalulekileyo kwiSebe lezeMpilo yaye zichaphazela wonke ubani.”
Uluntu lwaseHamburg beluhlupheke kakhulu kuba belungafumani iinkonzo zezempilo zezinga eliphezulu ngenxa yokungabinayo ikliniki kwingingqi yabo. ISebe lezeMpilo lizivile izimbonono zoluntu nezoompondo zihlanjiwe bezempilo eHamburg yaziphendula, susela oko isakhiwo sekliniki endala sawa ngenxa yemimoya ebhudlayo.
USihlalo wesiGqeba seeKliniki eHamburg, uMnumzana Khayalethu Peyi uthe bekunzima phambi kokwakhiwa kwale kliniki intsha.
“Ibingumba ongumngeni ebantwini abadala ukuba bafike ekliniki kuba ibisenkcochoyini yenduli,” utshilo uMnumzana Peyi.
UCeba kuWard 12 uMnumzana Sanga maneli uye wavakalisa amazwi ombulelo kuMphathiswa uGomba esithi: “ikliniki isin ika ithemba”.
“Siyabona ngokucacileyo xa singena ngaphakathi kwikliniki ukuba kukho ubomi ngaphakathi kwikliniki,” wongeze watsho.
Uluntu lonke lwaseHamburg neengingqi ezingqongileyo ngoku luzakufikelela kwiinkonzo zenkathalelo yezempilo yezinga eliphezulu. Abazokuchitha iiyure ezininzi belukrozo emigceni ngenxa yokuphuculwa kweendlela eziqingqiweyo zokwenza izinto zekliniki entsha kunye nokubakho kwamagumbi amathandathu.